Sei iPhone Yangu Ichiti Kudzivirirwa Kurudziro MuWi-Fi? Iyo Kugadzirisa! - Iphone
masvosve? ? zvinoreva
iTunes haizoone iphone 6
haigone kuwana apple app chitoro
yangu iphone 6 haigadzirise
5s kubata sikirini isiri kushanda
Iwe unovhura iyo Zvirongwa app kuti ubatanidze yako iPhone kuWi-Fi, uye zvese zvakanaka kusvikira iwe waona 'Security Kurudziro' pasi pezita reiyo Wi-Fi network. 'U-o,' iwe unofunga. 'Ndabiwa!' Usatombo kunetseka: hausi - Apple iri kungokutarisira iwe. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura nei iwe uchiona Chengetedzo Kurudziro mune yako iPhone's Wi-Fi Zvirongwa uye nei Apple yaisanganisira Chengetedzo Kurudziro yekubatsira kukuchengetedza iwe online.
Chii chinonzi 'Security Kurudziro' mu iPhone, iPad, uye iPod Wi-Fi Zvirongwa?
Chengetedzo Kurudziro inongowanikwa muZvirongwa -> Wi-Fi pane yako iPhone, iPad, kana iPod kana wave kuda kubatana kune yakavhurika yeWi-Fi network - network isina password. Paunodzvanya iro bhuruu yeruzivo icon
, iwe uchaona yambiro yeApple nezvekuti sei yakavhurika netiweki dzeWi-Fi dzingave dzisina kuchengetedzeka uye kurudziro yavo nezve maitiro ekugadzirisa yako isina waya router.
Tinya iyo bhatani remashoko (akafananidzirwa) kurudyi kwezita renetiweki kuburitsa tsananguro yeApple yambiro iyi. Tsananguro yacho inoti:
kuruboshwe kuruboshwe kunoreva chii
Vhura netiweki hazvipe chengetedzo uye kufumura ese network network.
Gadzira yako router kuti ushandise WPA2 Yega (AES) yekuchengetedza mhando yeiyi network.
Ndeupi Musiyano Pakati Peyakavhurika Uye Yakavharwa Network?
Yakavhurika network ndeye Wi-Fi network isina password. Izvi ndizvo chaizvo zvaunowana mumashopu ekofi, nhandare, uye chero kupi kumwe kunopihwa mahara Wi-Fi. Vhura netiweki zvinogona kuva nenjodzi nekuti chero munhu anokwanisa kuzviwana, uye kana munhu asiriye ajoina network, ivo Chivabvu kukwanisa kuona tsvagiridzo dzako, dandemutande, uye rimwe dhata rakaoma pasina mvumo yako neku 'kusora' pane yako iPhone, iPad, iPod, kana komputa.
Kune rimwe divi, yakavharwa network - iwe wakaifungidzira - network ine password. Apple inoti iwe unofanirwa 'kumisikidza yako router kuti ushandise WPA2 Yega (AES) chengetedzo', iri fomu yakachengeteka kwazvo yeWi-Fi network chengetedzo. Iyo WPA2 Yemunhu chengetedzo mhando yakavakirwa-mukati kune mazhinji mazuva ano mairaira uye inobvumira yakasimba network network mapassword ayo akaomarara zvakanyanya kutsemuka
Akavhurika Wi-Fi Networks Asina Kuchengeteka?
Pfungwa, chero munhu akabatana ne chero Wi-Fi network inogona 'kusora' padandemutande traffic iri kutumirwa uye kutambirwa nemamwe madhijitari pane iyo network. Kunyangwe vachigona ita chero chinhu chine traffic iyoyo chinoenderana nekuti kubatana kune imwe webhusaiti kwakachengeteka.
Unogona kuzadzikiswa kuti chero webhusaiti ine mukurumbira inoda kuti iwe utumidze password yako kana rumwe ruzivo rwemunhu uri kushandisa yakachengeteka kubatana kunyorera data rinotumirwa kubva ku iPhone yako kune webhusaiti kana app, uye zvinopesana. Kana mumwe munhu aibata traffic ye internet ichiuya nekubva ku iPhone yako kubva kune yakachengeteka webhusaiti, zvese zvavaizoona iboka revharidzirwa gobbledy-gook.
Zvisinei, kana uri kwete yakabatana kune yakachengeteka webhusaiti, iyo yekubira inogona kukwanisa kuona zvese iyo inotumirwa uye inogamuchirwa nefoni yako, kusanganisira mapassword ako uye mapeji aunoshanyira. Kune akawanda mawebhusaiti, hazvina basa. Heino chikonzero:
Kana iwe uri kungoverenga chinyorwa pane webhusaiti icho iwe chausingade kuti upinde mukati, hausi kutumira kana kugamuchira chero ruzivo rwepamoyo rwunokodzera kuba. The New York Times uye yakawanda yakawanda makuru enhau mawebhusaiti uye mablog haanamate zvinyorwa pane avo mawebhusaiti nekuda kwechikonzero ichocho.
Ndingaudza Sei Kuti Iyo Webhusaiti Yakachengeteka Pane Yangu iPhone, iPad, kana iPod?
Iwe unogona nyore kutaura kana iwe wakabatana kune yakachengeteka webhusaiti muSafari pane yako iPhone, iPad, kana iPod nekutarisa kune kero bar kumusoro kwechidzitiro: Kana iyo webhusaiti yakachengeteka, iwe uchaona iyo diki kukiya inotevera kune zita rewebhusaiti.
iphone bhatiri haina kukunda
Imwe nzira yakapusa yekuziva kana webhusaiti yakachengeteka kana kwete ndeyekutarisa kuti iro zita rezita rinotanga ne http: // kana https: //. Izvo zvinowedzera 's' zvinomiririra chengeteka. Mawebhusaiti anotanga ne https akachengeteka (kunze kwekunge paine dambudziko, mune iyo kesi iwe waizoona yambiro) uye mawebhusaiti anotanga ne http haazi.
Ndeupi Musiyano uripo Pakati Peblack Lock neGreen Lock Mune Safari?
Musiyano uripo pakati peblack lock uye kii yegirini ndiyo mhando ye chitupa chekuchengetedza (inonziwo SSL chitupa) iyo webhusaiti inoshandisa kunyorera traffic. Iyo nhema nhema inoreva kuti webhusaiti inoshandisa Domain Yakagadziriswa kana Sangano Rakasimbiswa chitupa uye green green zvinoreva kuti webhusaiti inoshandisa iyo Yakawedzerwa Kusimbiswa chitupa.
Iko Iko Kiyi Yegreen Yakachengeteka Zvakanyanya Kupfuura Iyo Nhema Kiyi Mune Safari?
Kwete - iko kunyorera kunogona kufanana. Ose maviri akasvibira uye matema makiyi anogona kuve iwo akafanana mwero wekunyorera. Musiyano uripo ndewekuti Green Lock zvinowanzoreva kuti kambani yakapa SSL chitupa kune webhusaiti (inonzi a chitupa chiremera) akaita tsvagiridzo yekuona kuti kambani muridzi webhusaiti ndiyo kambani ndiani ndinofanira ive yako webhusaiti.
Zvandiri kureva ndeizvi: Chero ani zvake anogona kutenga chitupa cheSSL. Ini ndaigona kunyoresa bankofamerlcaaccounts.com (ona chinyorwa chidiki 'L' chinotaridzika sa 'i') nhasi, ndobatanidza webhusaiti yeBhangi reAmerica, uye nditenge chitupa cheSSL kuitira kuti vanhu vaone iro dema diki padhuze nekero bar kumusoro. yechidzitiro.
Kana ndikaedza kutenga Yakawedzerwa Kusimbiswa chitupa, chitupa chiremera chinokurumidza kuziva kuti ini handisi Bank Of America ndoramba chikumbiro changu. (Ini handisi kuzoita chero izvi, asi ini ndinozvitaura semuenzaniso wekuti zviri nyore sei kune vabiridzi kutora mukana wevanhu online.)
Mutemo wechigunwe ndeuyu: Usambofa wakaisa chero ruzivo rwemunhu wega rwewebhu webhusaiti iyo isina yekuvharira mubara rekero kumusoro kwechiso.
Kana Iwe uchida Kugara Chaizvoizvo Yakachengeteka PaWi-Fi Networks
Zvino zvatakakurukura kuti nei ndizvo yakachengeteka kubatanidza chengeteka mawebhusaiti uye maapplication pamusoro peWi-Fi, ndiri kuenda kukuyambira nezvazvo: Kana iwe usina chokwadi, usadaro. Nzira yakanakisa yekugara wakachengeteka ndeye kusambopinda mubhangi rako kana mamwe akakosha maakaundi epamhepo kana uri pane yakavhurika network. Ruzivo rwacho rwakanyorwa, asi vamwe vabiridzi vari chaizvo kugona. Vimba ura hwako.
Chii Chandinofanira Kuita Kana Ndikaona 'Security Kurudziro' Pane Yangu iPhone?
Kurudziro yangu ndeye: tevedzera kurudziro yaApple! Kana iwe uri kuwana Yekuchengetedza Kurudziro chiziviso kana uri kumba kwako Wi-Fi network, wedzera password kune yako network sezvazvinogona. Uchaita izvi uchishandisa yako Wi-Fi router. Zvingave zvisingaite kwandiri kuti nditsanangure maitiro ekuita izvozvo kune yega router pamusika, saka ini ndinokurudzira kukurumidza kutsvaira rako rairori bhuku kana Googling yako router nhamba yemodheru uye 'rutsigiro' kuti uwane rubatsiro.
Ramba Wakachengeteka Kunze uko!
Takataura nezvekuti sei yako iPhone ichiti Security Recommendation muWi-Fi marongero, musiyano pakati peyakavhurika uye akavharwa maWi-Fi network, nei uchigara wakachengeteka kunyangwe iwe wakabatana kune yakavhurika kana yakavharwa yeWi-Fi network - se chero bedzi iyo webhusaiti yauri kushamwaridzana nayo yakachengeteka. Kutenda nekuverenga, uye kana iwe uine zvimwe zvataurwa, mibvunzo, kana kunetsekana nezvedambudziko iri, inzwa wakasununguka kusiya chirevo pazasi!